Kyaw Moe Aung's Page - Myanmar Network
Kyaw Moe Aung's Likes
Kyaw Moe Aung's Friends
Kyaw Moe Aung's Discussions
Started this discussion. Last reply by bamboo Mar 13, 2019. 1 Reply5Likes
ပုဂ္ဂလိက ပညာရေး အတိုင်းအတာတစ်ခုထိ အခွင့်အလမ်း ရှိလာတော့ ဆရာဆရာမ လုပ်လိုသူတွေလည်း အရင်ကထက် ပိုလာပါတယ်။ပညာရေးမှာ မှန်မှန်ကန်ကန် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းသူတို့အတွက်လည်း "တပည့်မရှား တစ်ပြားမရှိ" ဆိုရမယ့်ခေတ်…Continue
Started this discussion. Last reply by Ei Phyu Phyu Win Jul 1, 2017.3Replies 16 Likes
<Zawgyi Version>ဒီနှစ် ဆယ်တန်းအောင်ထားသူတွေ တူတူမအရွယ်တွေ၊ တက္ကသိုလ်တက်နေဆဲ ဒါမှမဟုတ် ကျောင်းပြီးစ ညီငယ်ညီမငယ်တွေရော မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းတွေကပါ ပညာသင်ဆု scholarship လျှောက်ကြရမလား …ဘာ စာမေးပွဲတွေ…Continue
Started Sep 24, 20160Replies 8 Likes
UK အစိုးရက ချီးမြှင့်တဲ့ Chevening Scholarship ကို Online ကနေ တစ်ဆင့် လျှောက်ထားအပြီး လေးလလောက်အကြာမှာ Chevening က email ရပါတယ်။ ပထမအဆင့် screening မှာ အောင်မြင်လို့ နောက်တစ်ဆင့် interview အတွက်…Continue
ကျွန်တော် နှင့် နိုင်ငံခြား ပညာသင်ဆု
Started Sep 24, 20160Replies 13 Likes
UK အစိုးရကပေးတဲ့ Chevening Scholarship ကို လက်ရှိ လောလောလတ်လတ် ရထားသူ၊ အရင်ကလည်း US အစိုးရကပေးတဲ့ online သင်တန်း scholarship ရခဲ့ပြီး အမေရိကန်နိုင်ငံကို ရက်တိုသင်တန်း သွားတက်ခွင့် ရခဲ့ဖူးသူ ဆိုတော့…Continue
Kyaw Moe Aung has not received any gifts yet
Kyaw Moe Aung's Page
At 15:38 on May 3, 2018,
At 13:57 on October 10, 2016,
At 22:52 on February 28, 2016, Paing Paing said…
At 10:50 on February 26, 2016, Win Kyaw Aung said…